Duqa Gaalkacyo: Ciidanka Danab Ee Yimid Gaalkacyo Howlgallo Bay u Yimaadeen – Goobjoog News
Markii ugu horreysay maamulka Gaalkacyo ee dhanka Puntland ayaa ka hadlay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhowaan degay garoonka diyaarada C/laahi Yuusuf ee magaaladaasi.
Duqa Magaalada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiim Tumay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa gaarka u tababaran ee loo yaqaano Danab, islamarkaana halkaasi ay u tageen howlgallo amniga la xiriira.
Mr Tumay ayaa sheegay in aanu waxbo ka jirin warar sheegaya in ciidamadan ay u tageen Gaalkacyo inay la wareegeen guud ahaan garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusf, balse ay tahay oo kaliya in howlgallo amni ay ka sameeyaan magaalada Gaalkacyo guud ahaan.
“Ciidanka Danab eee yimid magaalada Gaalkacyo howlgallo bay u yimaadeen in magaalada Labadeeda dhinac ka sameeyaan, waxbo kama jiro wararka sheegaya in garoonka ay la wareegeen, waa ciidan Soomaaliyeed, laakiinse dadka gobolka ku sugan ayaa warka siyaabo kala duwan u fasirtay” ayuu yiri Duqa Gaalkacyo.
Hadalkaan kasoo yeeray Duqa Magaalada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiim Tumay ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhawaan maareeyaha Garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusuf uu gabi ahaanba meesha ka saaray jiritaanka wararka ku aadan in ciidan ka tirsan xoogga dalka ay gaareen halkaasi.
Dad Badan Oo La Il Daran Cudurka Shuban Biyoodka, Degmada Mahadaay
Ioaazm bnpxpl Canadian pharmacy viagra cialis coupon walgreens
Envxgx ccyieb Buy cialis usa cialis price
Hqclqg omholf lowest price on generic viagra cialis otc
Nbjijv zvoygq Drug viagra when will generic cialis be available
Doskfh cdgerc rx pharmacy best online pharmacy
Dnsrxk tijgti online canadian pharmacy Wngue...
Jzgcln wqkmfr canadian pharmacy online Ilhby...
Nysrxy nnfcoq canadian online pharmacy Krcdw...
Ayunbu nzwxnl pharmacy online Mjdow...
payday loans san diego [url=https://paydayloans01.com]payday...